ZVIMWE ZVAKAITIKA: United Airlines Untold Nyaya yeCOVID-19 Nightmare Inoenderera
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » avhiyesheni » ZVIMWE ZVAKAITIKA: United Airlines Untold Nyaya yeCOVID-19 Nightmare Inoenderera
avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Vanokwira makumi mashanu vakabhururuka nendege yeUnited Airlines 50 kubva kuChicago kuenda kuMilwaukee, inofambiswa neAir Wisconsin, neMuvhuro vachange vasina chokwadi kana vakawana COVID-3742. Kubhururuka uku kwaifanira kunge kusati kwambobvumidzwa kuenda, uye izvi zvakasimbiswa nemushandi wendege uye kaputeni seisina kuchengetedzeka.
Iyo FAA yakasvika kune eTurboNews ndokubvuma nyaya yacho.
Iyo FAA yakaudza eTurboNews maMhepo Ekugadzirisa maSystem akaputsa uye zvaive zvisina kujairika kuti ndege ibhururuke nevatakuri, asi zvisiri pamutemo
FAATold eTurboNews kuti loopole inogona kunge yakawanikwa nekuda kwenyaya iyi. Ndezvipi zvakanaka munguva dzisiri denda, zvinogona kunge zvisina kuchengetedzeka panguva yedenda. Imwe yekuvandudza ichave iri kuuya
Imwe ndege yeUnited Airlines uko kusefa kwemhepo kwakadzimwa nekuda kwekusashanda kwakabvumidzwa kubhururuka.
Iyi nyaya yaizivikanwa isati yasimuka uye ikaregeredzwa.
United Airlines UA 3742 kubva kuChicago kuenda kuMilwaukee muna Gumiguru.
Scott Kirby, United Airlines CEO, akadaro muna Chikunguru 2020: "Tinoziva zvakatipoteredza nendege zvakachengeteka, nekuti kufema kwemhepo kwakagadzirirwa kudzikisira hutachiona, saka pakutanga patinowedzera kufefetera kwemhepo pamusoro peedu HEPA filtration system, zvirinani kune vedu vashandi uye vatengi vedu. Hupenyu hwemhepo, pamwe chete neyakaomeswa mutemo uye masisitimu akawanzoiswa utachiona, ndizvo zvivakwa zvekudzivirira kupararira kwe COVID-19 mundege. "
Zvinovhiringidza kuona kuti iyo chaiyo ndege yakateera zvakarumbidzwa na CEO wayo senzira chete yekushandisa nendege zvakachengeteka panguva yedenda.
United Airlines yekugadzirisa muChicago yakakurudzira kaputeni kubhururuka UA 3742 kuti ibvise kuziva iyo mhepo firita system haigone kushandiswa pane iyi pfupi ndege yekuMilwaukee. Chikonzero: Mhepo Wisconsin yekugadzirisa iri muMilwaukee - usambofungisisa nezvevatakuri.
UA 3742 yaishandiswa neMilwaukee-based commuter airline Air Wisconsin, ichishandisa CL 65, inoita kunge ndege yeCRJ 200. Iyo Canadair CL 65 inendege-makumi mashanu ndege yakavakwa neQuebec, Canada-based Bombardier, pakati pa50 na1992.
apo eTurboNews inonzi Bombardier rutsigiro rwehunyanzvi, bhuku iri rakaudzwa kuti ndege yakanga yanyanyisa kukwegura kuti ive nerutsigiro rwepaindaneti parizvino.
Thanks kune chipatara-giredhi yakakwira-inoshanda particulate mweya (HEPA) mafirita, huwandu hwakawanda hwezvinhu (kusanganisira utachiona nemadonhwe ekufema nemavhairasi) zvinobviswa pamhepo yemazuvano yenhandare yendege nguva nenguva sezvo ichichovha bhasikoro uye nekutsiviwa nemhepo nyowani. Izvi zvinoitika pane dzese ndege dzakakura kupfuura dzakawanda-makumi mashanu-zvigaro zvematunhu jets kunyangwe dzimwe ndege dzichiisa mari muHEPA kusefa tekinoroji pane iwo ndege izvozvi, futi.
Chii chiri pachena, kana pasina kutenderera kwemhepo zvachose kuchiitika pane ndege yevatakurwi, izvi zvinoisa vafambi vakadaro nevashandi vari mungozi yekubata utachiona, senge COVID-19. eTurboNews akasvikira gweta redzimhosva Lee muNew York, uye VJ P, aimbova VP weEtihad Airways kuti asimbise izvi.
Zvinokurudzirwa kuti ugare tsoka nhanhatu kubva kune anotevera mufambi, izvo zvingangove zvisingaite pane chero ndege yekutengesa, kunyanya pajeti rakazara-rakazara, senge UA 6 muna Gumiguru 3742.
Pasina kuremara munharaunda, chaiyo mhepo kusefa ndiyo inogona kuve chinhu chete chingamire pakati pemupfuuri nehutachiona.
PaUA 3742 inoshanda kubva kuChicago O'Hare kuenda kuMilwaukee musi waGumiguru 4, United Airlines vashandi vepasi vakazivisa munzvimbo yekubhodhi, kuti igone kudziya mundege sezvo mhepo yekugadzirisa yakanga isiri kugadzirisa. Pasina nguva zvakatsanangurwa kuti iyo nzira yekufefetera yese yakanga yabuda, uye kuti zvaizoisa vese vafambi nevashandi panjodzi yekubata iyo coronavirus kana chero zvimwe zvirwere zvemumhepo.
UA 3742 yakanyorera kumugwagwa kuChicago, uye tembiricha mukati yaive yatopisa, zvekuti vazhinji vakatakura vakatanga kudikitira, uye vamwe vakatanga kukosora.
Iyo yekutenderera mweya haina kumbobvira yauya, asi zvinoshamisa kuti, mushandi wendege anodada akatsanangura hurumende nyowani yeUnited Airlines yekuchenesa.
Paakabvunzwa pachivande, mushandi mumwe chete weendege akataura eTurboNews kuti aitya kuve ari mundege iyoyo uye akavimbiswa pane imwe ndege yapfuura iyo nzira yekufemfetwa kwaizoitwa kuChicago. Akataura kuti akabvuma kuramba achienda kuMilwaukee, inova yaive imba yake, achiwedzera kuti haazodzokere kubasa kundobhururuka nendege iyi zvakare.
eTurboNews akadzokororwazve kuUnited Airlines neAir Wisconsin kuti vawane kujekeswa kuti mafirita akadai akashandiswa here mundege iyi. Panga pasina mhinduro kubva kana.
Sezviri pachena muChicago, huni yeUA, United Airlines yekuchengetedza haina kuda kubata nezvenyaya iyi uye yakapa zano rekutizira kuMilwaukee kuti ishande, saka ndege inogona kugadziriswa kuMilwaukee, iyo imba yeAir Wisconsin.
eTurboNews akataura nemutyairi mushure mekumhara uye akabvunza kana kwaive kwakachengeteka kushandisa ndege yakazara-yakazara ine isina kufanira kufefetedza mweya panguva yedenda. Mutyairi akabvuma eTurboNews yakanga isiri iyo, uye akakumbira ruregerero.
Mumwe mutakuri akataura kuti aive kaputeni akasiya basa uye akashatirwa kuti mukuru weAir Wisconsin aishandisa iyi ndege.
eTurboNews akasvika kuUnited Airlines kakawanda kuti aone kana vafambi mundege iyi vangangoteedzerwa, asi zvakare hapana mhinduro.
eTurboNews yakasvikawo kuUnited Airlines ichibvunza tsananguro. Hukama hweMedia hwakaudzwa eTurboNews, pakanga pasina chiitiko chakatemerwa ndege iyi.
Basa revatengi veUA rakati, iyi yanga isiri nyaya hombe nekuti yaingova ndege pfupi chete, asi vaizopa chikwereti zviuru zvishanu zvemafirita nekuda kwe "kusagadzikana."
Mumwe murume ane zita rekutanga "Chris" akataura naye eTurboNews muparidzi Juergen Steinmetz. Akadaro, iye aive VP weCorporate Security yeAir Wisconsin. Akabvuma chiitiko ichi ndokukumbira ruregerero. Akavimbisa kuti achadzokera kuTN aine mamwe mashoko. Izvo hazvina kuitika, asi panzvimbo pezvo Air Wisconsin yakatumira email isina zita rekubatana kana siginecha.
Nezve chiitiko chako chazvino pakubhururuka 3742 nebasa kubva kuChicago kuenda kuMilwaukee. Kuchengetedza ndiyo yedu yekutanga kukosha kuAir Wisconsin.
Ndege yakasangana neFAA nzira yekukwira mumhepo uye vashandi vedu, mukutaurirana nenyanzvi dzekuchengetedza, vakaona kuti ndege yakanga yakachengeteka kushanda. Tinokumbira ruregerero nekuda kwekukanganisa kwawakasangana nako nendege yako uye tinokutendai nekuunza nyaya iyi kwatiri.
Juergen Steinmetz anoti:
Gunyana 10, 2021 pa 03: 27
Ingo kujekesa chirevo chako.
United Airlines 1K sevhisi sevhisi yakandiudza mune yechipiri yekutevera kufona kuti vakandipa 5K mamaira. Ndakapindura ini ndanga ndisiri mushure mekuripwa asi tsananguro uye ndaida kuiona UA yaitevera vateveri vari mungarava.
Mukadzi kubva kuna 1 K mutengi mune ino yakadanwa runhare akati iyi yaingova ndege pfupi uye hapasisina muripo waigona kupihwa mvumo yekuregeredza kunetseka kwangu.
Ndakabvunza venhau vehukama vanhu mhinduro. Mushure memasere mashanu ekutevera emaimeri mhinduro chete yakagamuchirwa ndiyo yakaburitswa uye kubva kumhepo Wisconsin.
Ndakataura naChris VP wekuchengetedza kubva
Air Wisconsin uyo aiziva nezvenyaya iyi uye akavimbisa kudzokera kwandiri - haana kumbozviita.
L. Lazuli anoti:
Gunyana 10, 2021 pa 01: 49
Zvakawanda pano kufonera BS pa. A. Kwete ndege yeUnited kana vashandi, yaive ndege yekufambisa. B. Kana kugadzirisa kwakayambira Kaputeni nei pasina chinyorwa chakanyorwa pamusoro peyakavhuniwa system? C. Ini ndinopokana zvikuru kuti chero munhu muUnited management angazombotaura nevatori venhau achiti izvi "hapana chikuru kuita" sezvo yaive ndege pfupi. Kune mativi maviri kunyaya yega yega uye ino izere nemakomba.